MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: ABMA Journals (Vol. 1, No. 3)
ABMA Journals (Vol. 1, No. 3)
All Burma Monks Alliance (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး)
Volume I, No 3
၈-၃-၂၀၁၀ နေ့မှာ ABMA ဂျာနယ်ကို ၃-ကြိမ်မြောက် ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာရော၊ A4-စာရွက်နဲ့ရော လွယ်လွယ်ကူကူ ထုတ်ယူဖတ်ကြည့်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါသည်။
အဖွဲ့ပိုင် ၀က်ဆိုဒ်မှာလည်း အခုပတ်ဂျာနယ်ရော၊ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဂျာနယ်များပါ ဒေါင်းလုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
တစ်ပတ်ထက် တစ်ပတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် A B M A အဖွဲ့သားများ ဆက်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စာဖတ်ပရိသတ်ကို အသိပေးပါသည်။ ။
Posted by Nyo Gyi at 9.3.10
Labels: JOURNALS, SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION
2010 Election & Parties Law Based on 2008 Nargis C...
Comments on 2010 Nargis Election & Parties Laws
U Win Tin's 80th Birthday Speech